Maxaa dhiirrigelinaya Ficillada TABAN ee imtixaanaadka shahaadiga ah? |
Qiimaynta horumarka waxbarasho ee ardaygu waxay xaqiijisaa in la gaadhay ujeeddooyinkii waxbarasho ee dal lahaa iyo in kale (Wheeler, 1997).
Sidaa uu ku doodayo Nevo (1995) qiimayntaasi siyaabo kala duwan ayay u arkaan khubarada waxbarashadu; qiimayntu waa mid xog siinaysa go’aan qaatayaasha waxbarashada si ay u qaataan go’aanno horumarineed oo ay ku hagayaan waxbarashada dal., waa hab lagu ogaanayo macluumaad sax ah oo ku saabsan tayada ama tayo la’aanta shay ka tirsan manhajka waxbarashada ee dalkaasi ku dhaqmayo si loo helo jiilkii hoggaamineed ee mustaqbalka dalka ee qaabayn lahaa bulshadaasi.
Imtixaanaadka ardaydu waa nidaam lagu cabbirayo in ay ardaydu waxyaabihii la baray ay barteen iyo in kale. Waa nidaam lagu ogaanayo kartida macallinka ee gudbinta waxbarashadii uu tabinayay. Imtixaankaasi waa kuwo ka yimaadda gudaha dugsiga & kuwo dibadeed. Imtixaanaadka gudaha waa kuwo ay diyaariyaan macallimiinta dugsigu iyagoo raacaya hababka baaritaano, warbixino iyo imtixaano bileedyo ardaygu galayo. Imtixaanaadka ka baxsan dugsigu (External Exams) waa kuwo loo samaynayo dano daleed oo lagu ogaanayo tayada iyo qiimaha waxbarashadii uu macallinka dugsigu u tabinayay ardayga muddadii uu dugsiga ka tirsanaa, waa imtixaano shaqo iyo saamayn midna aysan ku lahayn macallimiinta dugsiyadii ardaygu ka tirsanaa maaddaama oo ardaygii & macalinkiiba la qiimaynayo – Somaliland waxaa masuul uga ah Guddida Imtixaanaadka Qaranka (Somaliland National Examination Board – SLNEB). Natiijada ka soo baxda Imtixaanaadkaasi waxaa loo isticmaalaa in go’aano lagu qaato lagu qiimaynayo awoodda aqooneed ee ardayga la imtixaamay (Fasasi, 2006). Imtixaanaadkaasi waxay aradyga u suuro galinayaan in uu waxbarasho sare galo ama uu shaqo ku galo. Sidaasi oo ay tahay, go’aanno badan oo ku wajahan imtixaankii ardayga laga qaaday ee waddankeenu ma ahan kuwo dhammaantood wada sax ah, sababo ay keeneen dhaqannada ka hor imanaya hab imtixaanka togan ee looga baahnaa ardayga ee sababay qishka baahey ee imtixaanaadku.
Diyaar garowga & dhamaystirka Manhajka Waxbarasho; Dhisida kalsoonida ardaygu waa arrimaha muhiim ka u ah imtixaanaadka ardayga laga qaadayo si ay ugu gutaan hab daacadnimo ah oo togan.
Marka aad eegto dugsiyada Sare ee dalka inta badan manhajka waxbarasho waxaa lagu dedaalaa in la dhammaystiro – dhammaystirkaasi manhajku ma ahan mid sidii loogu talo galay u socda oo wakhtigii ku habboonaa qabsoomaya, waxaase loo dhammays tiraa hab boobsiis ah iyadoo bilaha u dambeeya ardayda wakhtiyada cidhiidhi lagaga dhigo oo ay soo kallahaan, galinka dambe soo noqdaan isla markaana ay xiisas aad u badan ay qaataan. Tani waxay keentay in ardayga uu diyaar garowgiisu xumaado isla markaana ay ku dhacdo kalsooni darro badan oo sababta in uu qish sameeyo – waayo ma hayo wakhti ku filan oo uu ku diyaariyo ama ku barto wixii manhaj ahaa ee sida boobsiiska ah loo baray wakhtiyadii u dambeeyey ee ku dhawaa imtixaanaadka. Waa uu ku balaadhaa akhrisku oo ay ka baahdaa isla markaana wuxuu galaa xaalad qabyo-qabyo ah oo ardaygu aanu imtixaanka u galayn sidii daacadnimada ahayd ee laga rabay – taasi baddalkeeda wuxuu isku hawlaa xaalad & farsamo kasta oo uu ardaygu qish & tuugo ku samayn karo.
Cadaadiska ardayga si uu darajo sarre u keeno & Dacaayadaha ardayda u saraysa imtixaanaadka;Iyadoo diyaar garowga hore ee dhanka dhammaystirka manhajku ay wax walba sal u tahay ayay haddana waalidku culays & cadaadis ardayga ku saaraan in uu darajo sare keeno si uu ugu gudbo darajada waxbarasho ee tan uu ka gudbayo ku xigta, waalidku xog kama hayaan xaaladda diyaar garow ee dhanka dugsiga & xaalada kalsoonida ardayga ee imtixaanku inta ay leegtahay.
Agabka Waxbarasho; Kisilu (2000) wuxuu ogaaday in yaraanshiyaha ama la’aanshiyaha agabka waxbarasho ee dugsiyadu ay sababaan in ardaydu qishaan maadaama oo aanay haysan agab ku filan sida; buugaagta, goobaha wax lagu akhriyo, laababka lagu sameeyo waxyaabaha u baahan in ardaydu ay gacanta ka qabtaan ee sayniska ah – agabkaasi oo ah mid dhisi lahaa kalsoonida ardayga. Somaliland oo ah dal duruufo badan ku hareeraysan yihiin inta badan dugsiyadu malaha goobahaasi kaabaya ardayga marka laga reebbo dugsiyo gaar loo leeyahay oo agabkaasi laga helayo balse dhamaan bulshadu aanay fursad u wada lahayn duruufaha dhaqaale ee dalka ku gadaaman dartood.
La talinta, tilmaamidda & toosinta ardayga; In ardayga talooyin laga siiyo hab akhriska wanaagsan, diyaar garowga waxbarasho, hababka imtixaanaadka loo galo, natiijada xun ee qishku leeyahay, maamulidda wakhtiga, sida loogu adkaysto saamaynta ardayda aan fiicnayn ku yeelanayaan ardayga & kor u qaadidda hiigsiga & hammiga ardayga waa waxyaabaha abuura kalsoonida ardayga. Somaliland dugsiyadeeda waxbarasho gabi ahaan malaha qaybo u qaabilsan arrimahaasi aan kor ku soo sheegay oo muhiim u ah qaabaynta & qor-qoridda ardayga.
Ilaalada Imtixaanaadka & Tiknoolajiyadda; Kartida Ilaaliyayaasha hab-dhaqanka inta lagu guda jiro imtixaanka ayaa ah sababaha la ogaaday in ay keenaan in ardaydu qishaan. Njeru (2008) wuxuu ogaaday in ilaaliyayaasha qaarkood aysan ahayn kuwo u diyaarsan habka wax loo ilaaliyo ama se ay ku mashquulaan in ay akhriyaan jariirado & waxyaabo kale. Somaliland waxaa si cad oo aad u muuqata loo ogodaay in ilaaliyayaasha imtixaanaadka qaarkood ay yihiin kuwo la shaqaynaya ardayda, iyagoo ardaydu hab musuqmaasuq ah ilaaliyahaasha ula macaamilayaan. Arday badan oo aan la kulmay oo ka mid ah kuwa dugsiyada sare waxay ii xaqiijiyeen in ilaaliyayaasha qaarkood ay kaliya ka ilaaliyaan hadba cidda soo booqanaysa hoolka imtixaanka, marka laga noqdana ay hawshooda qishka halkii ka sii wataan – tani waxay ardayda siinaysaa xaalad & fursad ay ku qishi karaan imtixaanka si xorriyad ah. Taasi beddelkeeda waxaa aad u badan iyana ilaaliyayaasha akhlaaqiyaadka suubban & kartida leh ee waajibaadkaasi la saaray u gudanaya sida qiimaha & wanaagga leh kuwaasi oo ay ardaydu cadaadis ku hayaan marka ay imtixaanaadku dhammaadaan.